I-Huawei WiFi AX3, umzila kufuneka uphucule uqhagamshelo lwakho | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | 09/07/2021 13:00 | Ukuzenzekelayo ekhaya, elektroniki, Ikhaya, Reviews
El WiFi 6 Iya ithandwa, uninzi lwezixhobo zokugqibela eziphezulu sele ziyinyukile ukusukela kunyaka ophelileyo kwaye iya isanda ikhona nakumakhaya ethu. Nangona kunjalo, ezo mizila ezindala iinkampani "zisinika zona" zikude ekunikezeleni ngamava e-premium malunga noku.
Sihlalutya i-Huawei WiFi AX3, indawo efanelekileyo yomsebenzisi we-router yakho ene-WiFi 6 kunye nokusebenza okumangalisayo. Makhe sibone ukuba ungayithatha njani i-WiFi yasekhaya uye kwinqanaba elilandelayo kwaye uphucule amava akho e-intanethi xa uphela ngale mveliso yeHuawei ibiza ixabiso eliphantsi.
Njengamaxesha onke, sithathe isigqibo sokwenza ividiyo apho ungajonga khona kwi-unboxing yale Huawei Wifi 6 leyo ungathenga kwi-59,99 euro kwiAmazon. Ungaphoswa luhlalutyo kwisiteshi sethu YouTube kuba sikubonisa nendlela yokuyicwangcisa ngokukhawuleza. Sishiye nayiphi na imibuzo kwibhokisi yezimvo, siya konwaba ukukunceda kwaye uya kusivumela ukuba siqhubeke nokukhula kwaye sikuzisele olona hlalutyo lubalaseleyo.
1 Uyilo: Imitha encinci yokukhanya kude nabaqhubi
2 Iimpawu zobuchwephesha: iWiFi kunye "nenethiwekhi ephezulu"
3 Ukufakwa kunye noqwalaselo
4 Uvavanyo lwethu kunye namava omsebenzisi
5 Okuhle nokubi
Uyilo: Imitha encinci yokukhanya kude nabaqhubi
Siqale ngoyilo, masijongane nayo, le IHuawei WiFi AX3 Yiminyaka elula kude nomqhubi wabaqhubi, ineemilo ezincinci kakhulu. Ii-eriyali ezine ezisemva ziyarhoxa kwaye sinokuzibeka kwi-router ukuba sinqwenela.
Kuyinto encinci kangangokuba iyathandeka, Nangona inamaqhinga, iphakanyisiwe ngasemva. Yenziwe ngeplastiki emhlophe matte, iyayiphindisela iminwe kwaye ayibonisi uthuli, ubunewunewu. Sinesibonakaliso se-LED ngaphambili kunye neqhosha eliphambili lonxibelelwano neHuawei Link. Ngasemva Sishiya uqhagamshelo lwe-WAN oluya kubonelela ngenethiwekhi kwi-router, kwizibuko lamandla, iqhosha lokuvula / lokucima kunye namazibuko amathathu e-LAN. Ngaphandle kokulibala ukuba ikona yasekunene engaphambili kwendlela ye-NFC yindawo yokudibanisa izixhobo zeHuawei kwi «plis».
Iimpawu zobuchwephesha: iWiFi kunye "nenethiwekhi ephezulu"
Sele siyazi ukuba intle, kodwa ngoku into ezayo ezayo ebaluleke ngakumbi kunaleyo yangaphambili, yintoni efihliweyo ngaphakathi? Siqala ngokukhumbula ukuba le-Huawei WX3 ye-Huawei ithengiswa ngeendlela ezimbini, isiseko-esingundoqo kunye ne-quad-core. Ngenxa yomahluko wamaxabiso, ndincoma ngokunyanisekileyo i-quad-core version, eyiyo esiyihlalutyo ngalo mzuzu. Amazibuko amathathu angasemva yiGigabit Ethernet ukuze i-bandwidth ye-1.000 Mbps iqinisekiswe.
Kwinqanaba lokhuseleko, sinenkxaso yephasiwedi WPA3 ke sinokwabela kweli nqanaba, ukuba sinqwenela njalo. Ngokubhekiselele kwi-WiFi, sinomgangatho WiFi 6 nge 802.11ax / ac / n / a 2x2 kunye 802.11ax / n / b / g 2x2 kunye MU-MIMO, akukho nto ingako kwaye akukho nto ingaphantsi. Iprosesa eqhuba konke oku yi IGigaHome Quad-Core 1,4 GHz eya kuba noxanduva lokusasaza umqondiso ngobukrelekrele, kunye nokusivumela ukuba sonwabele amanqaku esicelo seHuawei sika-AI soBomi esiza kuthetha ngaso kamva. Ekuphela kwento eseleyo ukukhankanywa, nangona sele sithethile ngayo, kukuba sine-NFC kwisiseko sayo.
Ukufakwa kunye noqwalaselo
Ukuyifaka sinayo iindlela ezimbini esikushiya ngezantsi:
Cima iinethiwekhi zeWiFi zendlela yomqhubi wethu kwaye uqhagamshele intambo ye-Ethernet ngezibuko le-LAN 1 yomqhubi womzila kunye nezibuko le-WAN le-AX3. Ngale ndlela, siza kuthatha indawo yenethiwekhi yeWiFi yomzila womqhubi kunye naleyo yomgaqo wethu weAX3, kodwa ubunzima benethiwekhi buya kuqhubeka buqhutywa ngulo mqhubi.
Beka umzila womqhubi wethu "kwimowudi yebhulorho" kwaye uqhagamshele kwi-LAN 1 yomqhubi womqhubi ukuya kwi-WAN ye-AX3. Ngale ndlela, umzila womqhubi "ugqithile" kwaye usebenza njengebhulorho phakathi kwentambo ye-fiber optic kunye ne-AX3 router yethu, ke unxibelelwano luya kuxhomekeka ngokupheleleyo kwi-AX3.
Sikhethe ukhetho lwesibini, into entsonkothileyo kodwa eqinisekisa ukuzimela ngokupheleleyo kwi-router endala yenkampani, iqinisekisa, okanye ubuncinci ukuzama, ukuba sinoluncinci kunxibelelwano, olulungele ukudlala imidlalo.
Ngoku sidibanisa ngokulula kwinethiwekhi ye-AX WiFi3 kwaye siya kulandela uluhlu lwamanyathelo aya kusikhokelela ekunikezeleni iphasiwedi, igama kunye nayo yonke into esiyifunayo. IHuawei iyenza ibe lula kangangokuba kungafanelekanga ukuba ichazwe. Yintoni efanelekileyo kukukhuphela i-AI ye-AI yoBomi besicelo (Android / iOSOko kuyakusivumela:
Lawula ukuba zeziphi izixhobo ezixhumeneyo kwaye unike amagama kuzo
Nciphisa ukhuphelo / ulayisho ngesixhobo ngasinye esiqhagamshelwe ngesandla
Ukuseka inkqubo yolawulo lwabazali oluphambili
Yenza uthungelwano lwendwendwe lweWiFi
Cwangcisa isibambi xesha seWiFi
Ukuchonga inethiwekhi yethu
Ukucima / ukucima isibonisi se-LED
Sebenzisa iwizard yokusebenziseka kwenethiwekhi yeWiFi ezenzekelayo
Hlaziya kwaye ulawule i-AX3
Ngaphandle kwamathandabuzo i sicelo linyathelo elingaphaya, iqabane elifanelekileyo eliguqula amava abe yinkqubo epheleleyo.
Uvavanyo lwethu kunye namava omsebenzisi
Kudala sivavanya i-AX3 ngomnatha we-600/600 Mbps womnatha osuka kwi-O2 (Telefónica) kwimowudi yebhulorho, njengoko kuchaziwe apha ngasentla. Ngale nto sisebenzise izixhobo ezihambelana nomgangatho weWiFi 6, njengeMacBook Pro kunye neHuawei P40 Pro. Ngaxeshanye sinezixhobo ze-IoT ezingama-30 eziqhagamsheleneyo phakathi kwezithethi, izicoci zokucoca, ukukhanya kwezibane kunye nokuzenzekelayo ekhaya ngokubanzi.
Inethiwekhi ye-2,4 GHz: Kule meko, isantya khange sibe luphuculo olubonakalayo, uluhlu luthintelwe kwaye lubonelela malunga neziphumo ezifanayo ne-router yomqhubi, nangona kunjalo, ngokungafaniyo neyangaphambili, inethiwekhi ayizalisekanga okanye ixhwili ukusebenza kwesixhobo, le AX3 iyakwazi ukulawula ukudibana okungaphezulu kwe-150 ngaxeshanye, kwaye iyabonisa.
Inethiwekhi ye-5 GHz: Kule meko sibonile ukuphucuka okubonakalayo ngokubhekisele kukugubungela kunye nesantya, ukufikelela kwisantya esiphakathi se-550/550 Mbps
Uphengululo lwe: Miguel
Ithunyelwe nge: 9 de julio de 2021
Ngokubanzi, amava aphucule ngokumangalisayo kusetyenziswa kuphela umzila weHuawei AX3 kunye nokushiya umqhubi kwimowudi yebhulorho, ke siyacebisa, ngakumbi ukuba njengam unee-IoT ezininzi okanye izixhobo ezenzekelayo ekhaya, ucinga ukuthatha inyathelo lokuya phambili malunga noku. Ixabiso layo lijikeleze ama-euro angama-50 kuxhomekeke kwinqanaba lokuthengisa xa kukho izibonelelo, ezihlala zixhaphakile, ngenxa yoko andinakufumana sizathu esinye sokuqhubeka nokugcina umqhubi.
Uyilo olumangalisayo kunye nezinto ezikhethwe kakuhle
Ukusekwa okulula kunye ne-AI yoBomi
Ixabiso elingenakubethwa ngokoqobo
Ndikhumbula into engaphezulu kwenqanaba
Ayibandakanyi intambo ye-CAT 7 ubuncinci, kodwa i-CAT 5e
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Ukuzenzekelayo ekhaya » I-Huawei WiFi AX3, umzila kufuneka uphucule unxibelelwano lwakho
Uyibukela njani iMidlalo yeOlimpiki yaseTokyo 2020 yasimahla kwaye uphile